Cudbiga haweenku isticmaalo iyo alaabo laga baari doono kiimiko - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nooc ka mid ah noocyada duubiyada (cudbi, suuf) ee haweenku isticmaalo. sawir: Janerik Henriksson/TT
Cudbiga haweenku isticmaalo iyo alaabo laga baari doono kiimiko
La daabacay tisdag 19 september 2017 kl 08.30
Hayadda kor-meerka kiimikada ayaa qariidadayn (baaris) ku sameeyn doonta la xiriira walxaha khatarta ah qaar ka mid ah alaabooyinka loo isticmaalo nolol-maalmeedka.
Baarista ayaa salka ku haysa alaabooyin ey ka mid yihiin alaabada guryaha, qalabka tababarka loo isticmaalo iyo sidoo kale dharka. Noocyada kala duwan ee cudbiyada (duubiga) iyo xifaayadaha aweenku isticmaalaan kolka ey caadada helaan ayaa xoogga la saari doonaa.
Maadooyinka ku jira walxaha ey ka mid yihiin rabarka, silikoonka iyo warqadda ayaa noqon kara kuwo saameeya isumiisaanka hormoonnada ama suurtagalka ilmo-dhalista. Iyada oo iminka ay hayadda kor-meerka kiimikadu qariidadeeyn doonto maadooyinka ku jira badeecadaha ama alaabooyinka la isticmaalo nolol maalmeedka. Dawladda ayaana u qoondeeysay miisaaniyad gaarsii-san 20 malyan oo koron afarta sannadood ee foodda innagu soo haysa, sida ay qortay laanta wararka ee Ekot.
Noocyada duubiyada ama xifaayadaha kala duwan ee haweenku isticmaalaan ayaa noqon doona mashruuc aad loo qiimeeyo. Maanta ayaan xeerarka si gaar ah loogu qiimeyn, sidaa daraateed aanay jirin hayad ay masuuliyad gaar ahi ka saaran tahay kiimikooyinka kala duwan ee alaabooyinkaa ku jiri kara. Shirkadaha ayay masuuliyad ka saaran tahay iney xaqiijiyaan ammaanka alaabooyinkaasi.
Maadooyin aan la garaneyn
Erik Gravenfors, ahna kiimiiste, baare ka howl-gala hayadda kor-meerka kiimikada ayaa aamin-san in mashruucan lagu ogaan doono maadooyin khatar ah ee ku jira alaabooyin kala duwan, iyo rajo laga qabo in macluumaad dheeri ah laga ogaado maadooyinka alaabooyinku ka sameey-san yihiin.
-Waxay xaaladda baaritaankani macne ballaaran u yeelan doontaa hayadda kor-meerka kiimikooyinka iyo in aannu kula kulmi doonno maadooyin cusub oo halis ah, sida uu sheegay Erik Gravenfors, ahna kiimiiste, baare ka howl-gala hayadda kor-meerka kiimikada.